काखीमुनिको गन्धबाट छुटकारा पाउने घरेलु उपाय - Nawalpur Dainik
काखीमुनिको गन्धबाट छुटकारा पाउने घरेलु उपाय
पसिनाका कारणले शरीर गनाउने समस्या सबैलाई हुन्छ । यसका लागि मानिसहरुले विभिन्न उपायहरु अपनाउने गरेका छन् । बजारमा पाइने विभिन्न बास्नादार सेन्टहरु प्रयोग गरेतापनि मानिसहरुले यो समस्याबाट मुक्ति पाएका छैनन् ।
खाशगरी बाढी प्रभावित क्षेत्रका किसानहरु चैते धान रोप्ने गरेका छन्। उनीहरु वर्षायाममा धान खेती रोप्न पाउँदैनन्। उनीहरुको खेतबारी बाढीले चुर्लुम्म डुब्ने गरेका कारण धान खेती रोप्न समस्या हुने गरेको छ। ‘हरेक वर्ष बाढीले खेतबारी समुन्द्र बन्छ, कसरी धान रोप्नु भजनी नगरपालिका–३, कुसुमघाटका विजय साउँदले भने–चैते धान रोपेन भने भोकै बस्नुपर्छ।
Prevकिन हुन्छ मिर्गाैलामा पत्थरी ? कसरी जोगिने सबै जानकारी
Nextनयाँ प्रजाति’को कोरोनाको फेरि अर्को डरलाग्दो रुप ! ब्राजिलमा एकै दिनमा एक हजार ६५६ जनाको मृ’त्यु